Hirshabelle: Cali Cabdullaahi Cosoble oo la Riday iyo Cali Guudlaawe oo Madaxweyne KMG noqday (dhegayso) – Radio Daljir
Agoosto 14, 2017 6:02 g 0
Xildhibaanada baarlamanka Maamulka Hirshabeelle ayaa kalsoonidii kala laabtay, kuna riday Madaxweyne Cali Cabdulaahi Cosoble. Mooshinka ridida ayaa maanta ka dhacay Jowhar.
68 xildhibaan ayaa u codeeyay in lagala laabto kalsoonida halka ay 2 xildhibaan ay ka soo horjeesteen xilkaqaadistaas. Kulanka ayaa waxaa soo xaadiray 76 xildhibaan, waxaana ka aamusay 6 xildhibaan.
Canab Axmed Ciise oo ah Guddoomiye kuxigeenka labaad ee Baarlamaana Hirshabeelle oo guddoomisay shirka ayaa ku dhowaaqday natiijada kalsooni-kala-laabashada Madaxweyne Cosoble, iyo Cali Guudlaawe oo noqday madaxweynaha KMG ah ee Hirshabelle.
War Murtiyeed Beesha Tanade: “Siyaasiyiinta Beesha Majeerteen baa na Dulmiyey, Siyaasaduna u Afduubantahay” (dhegayso)